Filohan’ny HCC : “Mila atao tsara ny asa amin’ny fifanarahana andraikitra” | NewsMada
Filohan’ny HCC : “Mila atao tsara ny asa amin’ny fifanarahana andraikitra”
“Tena lehibe amin’ny fifanarahana andraikitra ny fandraisana andraikitra. Manana andraikitra izay napetraky ny firenena aminy ny andrimpanjakana rehetra: atao tsara izay andraikitra izay.”
Io ny fanazavan’ny filohan’ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana (HCC), Rakotoarisoa Jean-Eric, tamin’ny mpanao gazety teny Ambohidahy, omaly, ny amin’izay takin’ny HCC momba ny tokony hanaovan’ny filohan’ny Repoblika sy ny Antenimierampirenena fifanarahana andraikitra.
Tsy voatery hoe miady sady manao ny andraikiny ireo andrimpanjakana, araka ny nambarany. Mahazo manontany sy manao fitsipaham-pitokisana Antenimierampirenena. Mba amin’ny antony izany, fa tsy amin’ny kajikajy na kilalao politika. Amin’izay tena fomba fampiasana azy amin’ny fifandraisan’ny samy andrimpanjakana.
Eto amintsika, tsy izay loatra no mitranga, raha ny fahitany azy. Mila havaozina ny fomba fiasana andrimpanjakana sy ny fitondran-tena. “Mila andrimpanjakana matanjaka ny firenena itokisan’ny olona”, hoy izy. Fa tsy hoe ny olom-panjakana no matanjaka.
Tanteraka ve izay hoe fifanarahana andraikitra izay? Namoahan’ny HCC didy ny amin’izany, ny 12 jona 2015. Mblola mandeha hatrany ny kajikajy sy ny kilalao politika amin’ny fitadiavana fahamarinan-toerana sy fitoniana politika?